Izindlu ezihlunga isikhwama sezindlu eziphezulu - Umhlinzeki wezindlu waseChina waseThalentline, Ifektri -Sffiltech
Indwangu yeMask Yobuso
Isihlungi Somshini Wokuhlunga
Ukuqoqwa Kwamandla Amalahle
Izimboni Zezimboni Zamandla
I-Metal Production Engakhokhelwa
I-Oxidation Yegesi Engaphansi Evela Kwamalahle-Wadonsa Boiler
I-non-Ferrous Metal Production
I-Kilin In Cement Factories Blast Ifenisha Ensimbi Yensimbi
Amakhemikhali Amakhemikhali, amakhemikhali we-Metal,
Isikebhe esidonsa ngamalahle
Isihlungi Sesiqeshana Sesihlungi Sevidiyo
Umshayeli nesoftware & Ukusekelwa okwenziwa ngesandla komsebenzisi
Amavidiyo Okusekelwa Kwezobuchwepheshe
Izindlu Zokuhlunga Izikhwama
Ikhaya » Imikhiqizo » Ukuhlunga kotshwala » Izindlu Zokuhlunga Izikhwama
Izindlu zokuhlunga zesikhwama selineline
Phezulu ochungechungeni olulodwa lwezezindlu ze-TS
Izindlu ezijwayelekile zokuhlunga isikhwama1, 2S, 3S, 4S
I-Sffiltech top top ku-single bag lemifanekiso yokuhlunga yezindlu ye-TS uchungechunge, "ikhwalithi eqondile, indawo elula", isebenzisa ukwakheka kwesihlungi sohlobo oluphambili kunabo bonke, ukuze kusebenze ukusebenza okuhle kakhulu, ihlangabezana nezimo ezinhlobonhlobo zokusebenza kanzima, okwamanje iyindawo ethandwa kakhulu kanye namamodeli wezindlu ezihlungiwe wesikhwama esisodwa.
I-TS2 # Insimbi engagqwali, i-TS2 # i-carbon iron, TS2 # PP / PVDF, TS1 # Insimbi engenacala, TS1 # PP / PVDF, TS4 # Insimbi engenacala, TS4 # PP / PVDF
Umphumela wokubekwa uphawu ungcono, ukuvimbela ekuvuvukeni;
Indawo yokuhlunga esebenza kahle enkulu, kanye nokusebenza kokuhlunga okuphezulu;
Kulula kakhulu ukufaka isikhwama esikhwameni ngendleko ephansi yokusebenza;
Isakhiwo esinengqondo, ukuhlunga okuzinzile okuthembekile;
Ukuphakama kokufakwa kungashintshwa ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zesikhathi esithile;
Idizayini elenzelwe wena, konke kwenzelwa wena.
Ikhava yokuvula uchungechunge lwe-TS (ukuhlungwa kwangaphakathi)
Isihlungi segag yezindlu
Sine-lemifanekiso eminingi yokuhlunga yezindlu eyodwa nesinayo sigxila kwimininingwane emincane ukuthuthukisa ukulawulwa kwekhwalithi.
I-Sffiltech ewuchungechunge yesikhwama sensimbi engenasici yensimbi luhlobo lwesakhiwo senoveli, umthamo omncane, ukusebenza okulula nokuguquguqukayo, ukonga amandla, ukusebenza kahle okuphezulu, ukusebenza okuvalekile kanye nemishini yokuhlunga egcwele yokuguquguquka ye-adapturpose.
I-Sffiltech chungechunge lokuhlunga kwesikhwama sezinsimbi ezingenasici: isilinda sokuhlunga senziwe lula, ikhanda lokuhlunga nesakhiwo sokuvula esisheshayo, isikhwama sokuhlunga sensimbi engenasici sokuqinisa izingxenye eziyinhloko zetha.
Isihlungi yithuluzi lokuhlunga lendawo yokucindezela, uketshezi oluvela kwigobolondo lokuhlunga eceleni kokungena esikhwameni sepayipi nedivaysi ekuqiniseni inethiwekhi, ukufakwa koketshezi kudinga isilinganiso sokukhanya kwesikhwama okungaba isikhwama sokuhlunga esifanelekile izinhlayiya isikhwama semifanekiso yokuthwebula. Ukushintshwa kwesikhwama sokuhlunga kulula kakhulu, ngaphandle kokusetshenziswa kwesihlungi sokwenziwa kwesihlungi.
Izici ze-Sffiltech top kusihlungi esisodwa esikhwameni:
Isikhala sangaphakathi sesihlungi sisetshenziswa ngokuphelele, futhi sisusa ngokuphelele udoti wesikhala ngohlobo lokungena lokungena lwendabuko.
Vula ikhava ingasusa ngokushesha isikhwama sokuhlunga, sinciphise ukungcola kwesibili, hhayi njengohlobo lwendabuko yokungena kwesidingo kudinga ukususa indandatho yokucindezela isihlungi ngaphambi kokufaka okunye.
Ipayipi lokungena elinamanzi libanzi, isembozo esingaphezulu sangaphakathi sinobume bokwakhiwa kwamacilongo, ngemuva kokungena kuketshezi kungahlukanisa ingxenye yomfutho ngokuzenzakalelayo; umthelela omncane kusihlungi-isikhwama, ukuvikela ngempumelelo isikhwama-sokuhlunga, ukuvimbela ezingozini, ukuncishiswa okuncane kwengcindezi, nokuhlunga kushesha futhi kuzinze ngokwengeziwe.
Isikhwama sokuhlunga sisebenzisa indandatho yelungelo lobunikazi, esiseduzane nesihlungi futhi singadedelwa; ukubeka uphawu okuningi, ngakho-ke umphumela wokufaka uphawu ungcono.
Upende, ubhiya, i-oyela yemifino, umuthi, izimonyo, amakhemikhali, imikhiqizo kaphethiloli, amakhemikhali endwangu, amakhemikhali wezithombe, isixazululo se-electroplating, ubisi, amaminerali amanzi, i-solvent eshisayo, i-latex, amanzi ezimboni, isiraphu, usinki, uyinki wokuphrinta, amanzi amdaka wezezimboni, ujusi , i-oyili edliwayo, i-waxes.